အံ့အားသင့်ဖွယ် လုံခြံရေး ဝန်ထမ်းရဲ့ စိတ်ထား - The Lifestyle Myanmar
Home Lifestyle opinion အံ့အားသင့်ဖွယ် လုံခြံရေး ဝန်ထမ်းရဲ့ စိတ်ထား
လူတချို့က ဆိုခဲ့ကြတယ် လူရိုးဆိုတာ သင်္ချိုင်းမှာပဲ ရှိတယ်လို့ …..။ တကယ့်လက်တွှေဘဝမှာ လူရိုးဆိုတာဟာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အများကြီးရှိပါတယ်။ ရိုးသားတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ မချမ်းသာပေမယ့်လည်း ရိုးသားတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ စိတ်က အမြဲတမ်းချမ်းသာတတ်ပါတယ်။ အခု ပရိတ်သတ်ကြီးကို တင်ဆက်ပေးမယ့် သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ လူရိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ လုံခြုံရေးဝန်းထမ်းလေး တစ်ယောက်အကြောင်းပါပဲ……..။ သူ့ရဲ့ ဖြစ်စဉ်ကိုတော့ လူမှုကွန်ယက်မှာ Joe Naing ဆိုတဲ့အကောင့်တစ်ခုက ယခုလို မျှဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ကျွန်​​​ေတာ့ကား လာဝယ်တဲ့ နယ်မှလာသော မိသားစု ကားဝယ်ပြီး အပြန် ကျွန်တော့်တို့ starcity Thanlyin က ကား ပါကင်ထဲမှာ ပုံပါ အိတ် ကျန်ခဲ့ပါတယ် ၊ star city က လုံခြုံရေးက တွေ့ပြီး ရုံးခန်းမှာ သိမ်းပြီး ဖွင့်ကြည့်တဲ့ အခါ ပုံထဲက အတိုင်း ရွှေ တွေ ရယ် ကား အုံနာ စာအုပ် ဖုန်း လိုင်စင် ဆိုက်ကယ်သော့နှင့် အခြား အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ တွေ့လို့ စာချုပ်ထဲ က ချုပ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်နာမည်နဲ့ အခန်းကို star city ရုံးခန်းမှ လာ ဆက်သွယ်ပြီး ပိုင်ရှင်ကို ပြန်ပေးဖို့ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
နာရီ ပိုင်းအကြာ ပိုင်ရှင်က စိတ်ပူ ပြီး ကျွန်တော့် အိမ်ကို ပြန်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာ ပုံပါ အတိုင်း starcity မှ တာဝန်ရှိသူများအရှေ့မှာ ပစ္စည်းများ စစ်ဆေးပြီး ပိုင်ရှင်ထံပြန်အပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာ အထူး ကျေးဇူးတင်ရမှာ က ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ starcity B4 က လုံခြုံရေး ပါ ။ သူရိုးသားပြီး သူ့ အထက်အရာရှိနဲ့ တာဝန်ရှိရုံးခန်းကို အပ်ခဲ့လို့ အခု လို ဒီပစ္စည်းတွေပိုင်ရှင် ပြန်ရတာပါ ။
ပိုင်ရှင် မိသားစုကိုယ်စား ကျွန်တော်က starcity လုံခြုံ ရေးများနှင့် တာဝန်ဝန်ရှိသူ အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်ရိုးသားတဲ့ လုံခြုံရေး ဝန်းထမ်းကို ဂုဏ်ပြုချင်လို့ အများသိအောင် pls like and share all my friends. Thanks. ကဲ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဒီလိုရိုးသားပြီး ကြိုးစားနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်လို့ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်နော်……..။
Source : Joe Naing
Previous articleဇာတ်ပွဲ မလာဘဲ ပြဿနာတက်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စ စွမ်းဇာနည် ကိုယ်တိုင် တောင်းပန်ပြီ
Next articleမန္တလေးတွင် နေအိမ်ရှေ့ ထိုင်နေသည့် မိသားစုဝင်သုံးဦး ကားကြိတ်ခံရ